Appy पाई अनुप्रयोग बिल्डर: प्रयोगकर्ता-मैत्री, No-Code अनुप्रयोग भवन प्लेटफर्म | Martech Zone
Appy पाई अनुप्रयोग बिल्डर: प्रयोगकर्ता-मैत्री, No-Code अनुप्रयोग भवन प्लेटफर्म
शुक्रबार, मार्च 27, 2020 शुक्रबार, मार्च 27, 2020 जयराज शेट्टी
अनुप्रयोग विकास एक लगातार विकसित उद्योग हो। अधिक र अधिक व्यवसायहरू अनलाइन उपस्थितिको लागि प्रतिक्षा गर्दै, अनुप्रयोग विकास संगठनहरूले उनीहरूको लागि काम छोडिदिन्छन्। एप्सको मागमा निरन्तर बृद्धि भएको छ जसले अवस्थित विकासकर्ताहरूलाई बढ्तै मार्केट बनायो। थप रूपमा, यो बढ्दो लागत र बढ्दो मागहरूको साथ ग्रस्त एक उद्योग हो। यस बाहेक, अवस्थित अनुप्रयोगहरूलाई स्थिर रखरखाव आवश्यक छ। अनुसन्धानले त्यो संकेत गर्दछ स्रोतहरूको% resources% व्यवसायका लागि अवस्थित अनुप्रयोगहरू कायम गर्न प्रयासमा खर्च गरिन्छ।
संगठनहरू अहिले सम्म यस अवस्थामा जीवित रहन सक्दछ, तर बढ्दो लागत र उनीहरूको अनुप्रयोगहरूसँग नयाँ बनाउनको लागि आवश्यक लगानीहरूले यस उद्योगको भविष्यका लागि गम्भीर चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यो स्वाभाविक हो कि अधिकांश संगठनहरू सफलताको बिभिन्न स्तरको साथ एजीआईएल विकासको लागि ठुम्किरहेका छन्। यद्यपि त्यहाँ एक नयाँ प्रविधि छ जसले संगठनहरूलाई बजारमा अगाडि बढ्न, AGILE लागू गर्न, लागत घटाउने र संख्या ड्राइभ गर्ने मौका दिइरहेको छ। यो कुनै कोड अनुप्रयोग विकास हो।
कुनै कोड अनुप्रयोग विकासको भविष्य हो। जबकि कोडिंग एक उद्योग हो जुन सँधै रहन्छ, कुनै कोड संगठनहरूको लागि अनुप्रयोग विकासको प्रक्रिया सजिलो बनाउनको लागि हुँदैन। एक अनुसार भर्खरै सर्वेक्षण, Of०% संगठनहरू या त ले कुनै कोड अपनाएको छैन वा आउँदो बर्षमा यसलाई अपनाउने योजना बनाइरहेको छ।
Appy पाई अनुप्रयोग निर्माता समाधान सिंहावलोकन
Appy पाई संगठन र व्यक्तिहरूको लागि एक अनुप्रयोग निर्माण समाधान प्रदान गर्दछ। यसको स्वामित्व अनुप्रयोग निर्माणकर्ता आज बजारमा उत्तम अनुप्रयोग बनाउने सफ्टवेयर मध्ये एक हो। यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल प्रकृतिका लागि परिचित, अनुप्रयोग निर्माताले तपाईंलाई केही मिनेटमा अनुप्रयोग बनाउन मद्दत गर्दछ। अप्पा पाईले तपाईंलाई आफ्नो ग्राहकहरूको लागि एन्ड्रोइड, आईफोन र PWA अनुप्रयोगहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ। २०० भन्दा बढी सुप्त सुविधाहरूको साथ, अनुप्रयोग बनाउने कहिल्यै सजिलो वा छिटो भएको छैन।
Appy पाई अनुप्रयोग निर्माता थोरै भन्दा than बर्ष भन्दा पुरानो हो। यी years बर्षमा तिनीहरूले व्यक्ति र व्यवसायलाई लाखौं अनुप्रयोगहरू बनाउन दिएका छन्। विशेषज्ञ विकासकर्ताहरूको समर्थनमा, सफ्टवेयरसँग पूर्ण रूपमा कोडलेस इन्टरफेस छ जसले विकासको समयलाई उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्दछ। थप रूपमा, यसले केही क्लिकहरूमा अनुप्रयोगको रखरखाव र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई पनि कम गर्दछ। अप्पा पाईको साथ, तपाई अनुप्रयोगको एक विस्तृत विविधता बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू, व्यवसायिक अनुप्रयोगहरू, ग्राहक समर्थन अनुप्रयोगहरू, एआर / वीआर अनुप्रयोगहरू, घर जग्गा अनुप्रयोगहरू आदि।
Appy पाई को सरल र सहज ईन्टरफेसको साथ, अनुप्रयोग बनाउने अनुकूलन र पर्याप्त सरलीकृत गर्न सकिन्छ।
के अप्पाइ पाई अनुप्रयोग बिल्डर अलग सेट गर्दछ:
सफा ड्यासबोर्ड डिजाइन सजिलो नेविगेशनका लागि अनुरूप।
२०० भन्दा बढी सुविधाहरू जस्तै पुश सूचनाहरू, VR क्षमताहरू, एकीकृत सामाजिक मिडिया र कुराकानीहरू
ह्यान्ड्स-अन अनुप्रयोग प्रकाशन स्टोरहरूको समर्थन। एक उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अर्थ एप्पी पाई तपाईंलाई सहयोग गर्न सँधै आउँछ।
Appy पाई यसको सफ्टवेयरको साथ रोलमा छ, हरेक दिन नयाँ, राम्रो उत्पादनहरू सिर्जना गर्दछ। तिनीहरूले नो-कोड बिल्डर प्रयोग गर्न सजिलोको साथ सुरू गरे र कुनै दर्शन कोड बिल्डरहरू, च्याटबटहरू र ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेयर सिर्जना गर्न समान दर्शन लागू गरे। अप्पे पाईको हाल आईटी उद्योगलाई यसको कुनै कोड अनुप्रयोग बिल्डरसँग बाधा पुर्‍याउने कुनै योजना छैन र अनुप्रयोग विकास उद्योग सामूहिक रूपमा बढ्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न लिगेसी प्रणाली एकीकृत गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
सत्य नो-कोड टाढा धेरै टाढा हुन सक्छ, तर अप्पे पाईले एउटा सफ्टवेयर डिजाइन गरेको छ जुन अनुप्रयोग विकासमा संलग्न सबै भारी लिफ्टिंगको ख्याल राख्न सक्दछ, संगठनहरूलाई जताततै तिनीहरूको ब्याकलगहरू खाली गर्न र पर्याप्त कम प्रयासको साथ सक्षम अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। अनुप्रयोग निर्माणकर्ताको आस्तीनमा साँचो ऐस तथ्य हो जुन यो अनुप्रयोगको लागि आवश्यक रखरखाव सजिलो बनाउँदछ। अनुप्रयोग निर्मातासँग, अद्यावधिकहरूलाई केही सरल क्लिकहरू आवश्यक पर्दछ जुन संगठनहरूलाई आविष्कारमा उनीहरूको प्रयासलाई केन्द्रित गर्न र बढ्दो उद्योगको माग पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण संसाधनहरू बचत गर्न अनुमति दिन्छ।
Appy पाई संग एक अनुप्रयोग बनाउँदै
Appy पाई को साथ अनुप्रयोगहरू बनाउनु तपाइँ सोच्नुहुन्छ भन्दा सजिलो छ। यो एक सरल step चरण प्रक्रिया हो।
रजिस्टर - अप्पा पाईको साथ साइन अप गर्नुहोस्। तपाईंको ड्यासबोर्डमा, डिजाइन ट्याब मुनि, तपाईंको अनुप्रयोगको लागि डिजाईन टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्। Appy पाई छनौट गर्न टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ। तपाईंको टेम्पलेट सम्पादन गर्नुहोस् र रंग, फन्ट र सजावट छनौट गर्नुहोस्। तपाइँको ब्रान्ड लोगो अपलोड गर्नुहोस्।
अनुकूलित - अर्को चरणमा तपाईंको अनुप्रयोगमा सुविधाहरू जोड्न समावेश छ। सुविधाहरू ट्याबमा, तपाईं सुविधाहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र फेरी तपाईंको अनुप्रयोगमा थप्नको लागि फिचरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ सबै सुविधाहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ उत्तम तरिकामा तपाइँको उद्देश्य अनुरूप। लाखौं प्रकारका अनुप्रयोगहरू निर्माणकर्ता ड्यासबोर्डमा उपलब्ध अनुकूलनको साथ सिर्जना गर्न सकिन्छ।
परीक्षण - एक पटक तपाईं आफ्नो डिजाइन र सुविधाहरू मा व्यवस्थित भएपछि, केवल एक उपकरणमा आफ्नो अनुप्रयोग परीक्षण र तपाईं सन्तुष्ट पछि, यो App Store वा Play Store, वा दुबै मा प्रकाशित।
Appy पाई संग एक अनुप्रयोग बनाउनको लागि तपाईले गर्नु पर्ने कुरा यही हो। अनुप्रयोग विकास विकसित हुँदैछ। कुनै कोड यो विकासको अर्को अपरिहार्य चरण हो। अप्पा पाईले सबै व्यवसायहरूलाई कर्भका अगाडि बढ्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। कुनै कोडको बढ्दो अपनन र प्लेटफर्मको द्रुत विकासले सबैका लागि उज्जवल भविष्य प्रदान गर्दछ।
आज नो-कोड क्रान्तिमा सम्मिलित हुनुहोस्! घर बाट काम गर्ने सबैलाई, सुरक्षित रहनुहोस्!
Appy पाई को लागी साइन अप गर्नुहोस्
टैग: appie पाईव्यवसायिक अनुप्रयोगहरूग्राहक समर्थन अनुप्रयोगहरूकुनै कोड छैनकुनै कोड अनुप्रयोग बिल्डरसामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू
जयराज एक सामग्री लेखक हुन् जसको जीवनमा लक्ष्य बहुविवाह हुनु हो। उहाँ अझै त्यहाँ हुनुहुन्न तर उनको खोजले उसलाई धेरै चीजहरूको बारेमा विस्तृत ज्ञान दिएको छ। उनले लेखेर आफ्नो ज्ञान बाँड्न कोशिस गर्छन्। आफ्नो खाली समयमा, उसले इन्टरनेट सर्फ गर्दछ, लामो हिंड लिन्छ, र वरिपरि फ्लर्ट गर्न कोसिस गर्दछ। ऊ टेरीलाई माया मन पराउछ।
होम अफिसबाट बिक्री भिडियो सल्लाहहरू
vidREach: एक भिडियो ईमेल प्लेटफार्म रीमाजिनि Pro प्रॉस्पेक्टि।